विवाह गरेका पुरुषहरु सँग किन आकर्षित हुन्छन युवतीहरु ? हेनुहोस् यस्तो छ कारण - Babal Khabar
October 19, 2021 by बबाल खबर
हरेक महिला आफ्नो पार्टनर आफुले सोचे जस्तो होस् आफुलाई माया गर्ने आफुलाई बुझ्ने खाल को होस् भन्ने चाहान्छन।
त्यसैले महिला हरु आफु भन्दा अलि बढी नै उमेर भएको पुरुष लाइ मन पराउने गर्दछन तर कोहि महिला भने बिहे भएको पुरुष लाइ मन पराउने गर्दछन कारण एस्तो छ हेर्नुहोस ।
खासमा पुरुषले आफू भन्दा कम उमेरकी महिला खोजेर यस्तो भएको होइन बरु महिलाहरु नै आफू भन्दा पाको उमेरको पुरुषसँग सम्बन्ध राख्न चाहन्छन् । हालसालै गरिएको एक अध्ययनले यस्तो देखाएको छ ।
१.सुरक्षित : केटीहरुले आफू भन्दा पाको उमेरका पुरुष खोज्नुका धेरै कारण छन् । खासमा पाको उमेरका पुरुषसँग उनीहरुलाई सुरक्षित महसुस हुन्छ ।
६.अनुभवी : महिलाहरुलाई यस्ता पुरुष चाहिन्छ जो अनुभवी हुन् । जीवनका अनेक अनुभव भएका पुरुष उनीहरुलाई मन पर्छ । उनीहरु चाहन्छन् आफ्नो पार्टनर यस्तो होस् जसमाथि हरेक कुरामा भर गर्न सकियोस् । महिलाहरुलाई आफ्नो प्रेमीलाई शहरका सबै रेष्टुराँ र फिल्महलको समेत जानकारी होस् भन्ने चाहन्छन् । यो खबर दर्पन पोस्टबाट साभार गरियको हो ।
Prevयी ३ काम कुनै पनि महीला र पुरुष दुबैले धेरै बेरसम्म गर्न हुदैन ! नत्र …